चुनाव सार्न खोजियो भने एमालेले जनतालाई सडकमा उतार्छ : अग्नि खरेल -
स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी छुट्टै कानुन छ, त्यसको अवधि जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । हामी त हारेका हौं नि, त्यसमा । एमाले हारेको हो नि त ! एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ भन्दै आएको थियो तर सर्वोच्चबाट विघटन गर्न मिल्दैन भनाइयो नि ! सर्वोच्च अदालतले त्यो भनेको होइन, हिजो उसलाई त्यसो भनाइएको हो । सर्वोच्च अदालतलाई त्यो फैसला लेखाइयो भन्ने हाम्रो दाबी छ । तर आखिर त्यो त अब अदालतको फैसला भयो । त्यो फैसला अहिले कायमै छ । अनि हिजो मुद्दा हाल्ने मान्छेहरुले कसरी त्यो होइन भन्न सक्नुहुन्छ ?ratopati bata